Eriri Laser akara Machine FOL-10/20/30/50 - China Dongguan Glorystar Laser
Product Akụkụ Otuto laser amalite ma na-amị zuru ikuku jụrụ Fiber Optical Laser marking usoro ke China. Ọ bụ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi, ala oriri, n'ụzọ zuru ezu na-akpaghị aka na-eduga laser usoro. Nke a okike laser usoro na-eme ka ngwa anya akakabarede ọnụego ruo 38% -50%. The ikuku jụrụ nwere ike izute usoro chọrọ. Nke a laser usoro bụ obere na kọmpat size. Eriri mmepụta, nwere ike flexibly eme ka 3D nhazi usoro. The backward egbukepụ isolator, nke na-eji particularit ...
Otuto laser amalite ma na-amị zuru ikuku jụrụ Fiber Optical Laser marking usoro ke China. Ọ bụ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi, ala oriri, n'ụzọ zuru ezu na-akpaghị aka na-eduga laser usoro. Nke a okike laser usoro na-eme ka ngwa anya akakabarede ọnụego ruo 38% -50%. The ikuku jụrụ nwere ike izute usoro chọrọ. Nke a laser usoro bụ obere na kọmpat size. Eriri mmepụta, nwere ike flexibly eme ka 3D nhazi usoro. The backward egbukepụ isolator, nke na-eji particularity nke wavelength na ntụziaka nke laser, na pụrụ iche Ọdịdị n'ime backward egbukepụ isolator nwere ike igbochi ndị laser gosipụtara site ọrụ ibe izere laser abanye laser oscillator ọzọ imebi laser oscillator.
Translucent plastic buttons, IC ibe, digital ngwaahịa mmiri, nkenke ígwè, ọla, ịdị ọcha ike, atụ na ịcha ngwaọrụ, watch iko, eletriki ngwa, electronic components, ngwaike ngwa, ngwaike ngwaọrụ, mobile nkwukọrịta mmiri, ụgbọala akụkụ, plastic ngwaahịa, ọgwụ ngwá, ụlọ ihe, ọkpọkọ na ndị ọzọ elu-nkenke ngwaahịa na-akanye.
Ọla na a dịgasị iche iche nke ndị na-abụghị dara ihe, elu ekweghị ekwe alloys, oxides, plating, mkpuchi, ABS, epoxy resin, ink, plastic, wdg
doo quality M2 <1.5
mmepụta ike 10% ~ 100% (nọgidere na-gbanwee)
mmepụta ugboro 20KHz ~ 100KHz (nọgidere na-gbanwee)
(8h) Power kwụsie ike (8h) <± 1% rms
Focus ntụpọ n'obosara <0.01 mm
kenha size 50X50mm 110mmX110mm 175mmX175mm
n'ilu ọlu omimi 1.2mm
n'ilu ọlu ọsọ 800 ọkọlọtọ odide / abụọ
Kacha nta akara obosara 0.012mm
kacha nta agwa 0.15mm
ugboro ugboro ziri ezi ± 0.003mm
System ọrụ WindowsXP / 2000/98
jụrụ mode Air jụrụ
Okpomọkụ nke ọrụ na gburugburu ebe obibi 15 ℃ ~ 35 ℃
Power chọrọ 220V / otu adọ / 50Hz / <400W
Life of laser modul 100000 aka elekere
Previous: 3D Dynamic Focus Series Laser akara Machine GLD-100 / GLD-200 / GLD-350
Osote: C02 Series Laser akara Machine CMT-10/30/60/100
Fiber Laser akara Machine
Laser akara N'ihi Metal
Metal Laser akara